Waqooyiga Kuuriya oo Mareykanka ku eedaysay iclaamin dagaal - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeWorldWaqooyiga Kuuriya oo Mareykanka ku eedaysay iclaamin dagaal
September 26, 2017 Puntland Mirror World 0
Wasiirka Arrimaha Dibada Waqooyika Kuuriya Ri Yong-ho. [Xigashada Sawirka: Reuters]
New York-(Puntland Mirror) Waqooyiga Kuuriya ayaa ku eedaysay Mareykanka in uu wado dagaal ka dhan ah iyaga.
Wasiirka Arrimaha Dibada Waqooyika Kuuriya Ri Yong-ho ayaa shalay oo Isniin ahayd warbaahinta u sheegay in adduunka oo dhan uu xasuusto in ay tahay Mareykanka cida iclaamisay dagaalka ka dhanka ah dalkooda.
Ri Yong-ho ayaa sheegay in dalkiisu uu xaq u leeyahay in uu soo rido diyaaradaha dagaalka ee Mareykanka xitaa haddii aysan ku jirin hawada Waqooyiga Kuuriya.
Hadalkiisa ayaa imaanaya lamo maalmood kadib markii diyaaradaha dagaalka Mareykana ay dul mareen xeebaha Waqooyiga Kuuriya iyaga oo muujinaya dhoolatus.
Maahan markii kowaad oo Waqooyiga Kuuriya iyo Mareykanku ay warbaahinta isku mariyaan eedaymo iyo hanjabaado u dhaxeeya iyaga.
February 15, 2018 Raysulwasaarihii Itoobiya Hailemariam Desalegn oo iscasilay
September 18, 2017 Turkiga oo dhoolatus milatari ka bilaabay meel u dhow xadka uu la wadaago Ciraaq
Gaalkacyo-(Puntland Mirror) Dagaal culus oo u dhaxeeyay ciidamada Puntland iyo maleeshiyada Galmudug ayaa galabta oo Sabti ah dib uga qarxay duleedka koonfureed ee magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug, sida ay sheegeen dadka deegaanka iyo ilo-wareedyo [...]